Xanuunada Lagu Daaweeyo Sanjabiisha - Daryeel Magazine
Dadkii berigii hore wax dawayn jiray waxay aad u isticmaali jireen xididada geedka Sanjabiisha si ay ugu daweeyaan cuduro tiro badan waxaanay cadaysay baadhitaano tirabadan oo la sameeyey mudo dheer inuu geedkani leeyahay raad caafimaad oo wayn sidaa daraadeed ayaa dadku aad u isticmaalaan waxaana laxaqiijiyay inuu 10 cudur baajiyo ama ka dawo yahayba waana kuwan anakoo soo koobnay tarjumadeedii:
1-Sidaan hore u soo aragnay baadhitaano badan oo lasameeyey ayaa cadeeyey faa’iidooyin badan oo ay Sanjabiishu leedahay, kuwaas oo lagu dawayn karo cudura kudhaca wadnaha xididada wadnaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka caloosha ku dhaca iyo xanuunka Sonkorta laakiin faa’iidooyinkaa tirada baan waxay u baahanyihiin in lahubiyo si ay Sinjibiishu u noqoto dawo dabiiciya oo bedesha tan kiimikada ah ee aan hada isticmaalo.
2-Sanjabiishu waxay dishaa ama ladagaalantaa cudurka Kansarka. Waxa ay soo saartay BMC Complementary and Alternative Medicine baadhitaan ay mudo wadeen oo ay ku sheegeen sida Sanjabiishu ula dagaalanto cudurka Kansarka isla markaana u diido inuu samaysmo cudurkaasi. Dad lagu tijaabiyay ayaa siwayn ugu caafimaaday isticmaalka geedkan.
3-Isticmaalka Sanjabiishu wuxuu yareeyaa subaga dhiiga. Cilmi baadhis ay samaysay majalad ka hadasha cuntada iyo beeraha,ayay ku ogaatay in Sanjibiishu jidhka ka nuugto subaga, kadib markii Jiir lagu tijaabiyay.
4-Sanjabiishu waxay ka hortagtaa jidhku inuu yeesho guntimo ama goobo bararsan. Majalada ka hadasha dhibaatooyinka cunooyinku abuuraan ayaa baadhitaan ay samaysay ku ogaatay in Sanjabiishu waxtar wayn u leedahay ka hortaga jidhku inuu yeesho kuus-kuus ama jidhka oo meelo ka mid ahi bar-bararaab,kadib markii ay gaadhay goobtii bugtay maadad ama mid kamid ah waxyaalaha ay Sanjabiishu ka koobantahay oo layidhaahdo “Shogaol”, waxaanay dareemeen cilmi baadhayaashii bararkii oo aad hoos ugu dhacay,kadib markii ay badatay samaysanka ama unkanka “heat-shock protein” oo laga helo Sanjabiisha.
5-Sanjabiishu waxay kordhisaa Dhareerka. Kadib markii hal mar oo keli ah Jiir lagu muday Sanjabiil,waxaa la ogaaday ama la arkay jiirkii oo dhareer badani ka daadanayo mudo 7 daqiiqo gudahood ah,waxaana laysku raacsanyahay in dhareerku aad muhiim ugu yahay caafimaadka ilkaha.
6-xididkani wuxuu wax ka taraa daryeelka iyo caafimaad qabka Beerka.
7-Sanjabiisu wuxuu joojiyaa kaarka oo xanuuno badani sababaan.
8- sida ay sheegtay majalada Reproductive Sciences sanjabiishu waxay dumarka ka caawisaa sidii ay si dabiici ah ugu dhali lahaayeen.
9-Sanjabiishu waxay dishaa Bakteeriyada,waxaana arinkaa lagu ogaaday markii lagu shubay dheecaanka geedkan meel ay ku jirtay Bekteeriya,kadibna ay si fudud uga takhalustay.
10-Faa’iidooyinka ay leeyihiin “antioxidants”ee laga helo Sanjabiisha oo farabadan waxay wax wayn u taraan dareemayaasha maskaxda waxaanay yareeyaan dhibaatooyinka uu leeyahay xanuunka ” Alzheimer’s disease”.
Tarjumaadii iyo Habayntii: Weriye Saciid Jamaal
Xanuunada Lagu Daweeyo Cabbista Biyaha Kulul & Xilliyada ku Haboon in la Cabo Qiimaha Caafimaad Ee Saliida Dhaga Yaraha Iyo Sida La Iskugu Daaweeyo Xanuunada Iyo Dhibaatooyinka Laga Qaado Hurdo Yaraanta Cunista Xabad Muus Ah Maalin Kasta Waxay Kaa Badbaadin Kartaa Xanuunada Indhaha